Garsooraha wuxuu shaaca kaqaaday tijaabada maxkamadaynta USWNT ee loo yaqaan 'Ficil Class' - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Garsooraha wuxuu shaaca kaqaaday tijaabada maxkamadaynta USWNT ee loo yaqaan 'Class Action'
Garsooraha wuxuu cadeeyay dacwada USWNT inay tahay mid talaabo laga qaadi karo
Graham Hays waxay daboolaysaa isboortiska jaamacadda ee Australia, oo ay ku jiraan kubbadda gacanta iyo kubadda cagta. Haysu wuxuu bilaabay ESPN 1999.
Maxkamadda Mareykanka ee Degmadda Kaliforniya ee Bartamaha Magaalada California Codsiga Shahaadada Fasalka ee La Ansixiyay Imtixaanka socda ee takoorka jinsiga inta udhaxeysa xubnaha Kooxda Haweenka Qaranka Mareykanka iyo Xiriirka Kubadda Cagta Mareykanka, kaasoo ciyaartoy siiya deg deg deg deg ah howsha.
Qaadiga R. Gary Klausner ayaa sheegay Jimcihi in dacwoodayaasha ay sii wadi karaan cadeynta magaca Carli Lloyd, Alex Morgan, Megan Rapinoe iyo Becky Sauerbrunn. Fasalka waxaa ku jira ciyaartoy u soo muuqday xulka qaranka tan iyo bishii Febraayo 4 2015.
Shahaadada fasalka ayaa u oggolaanaysa ciyaartoydu inay dacwadooda qaddarin u sameeyaan koox ahaan iyo ciyaartoydu inay iska diiwaangeliyaan fasalka. Kuwa aan aqbalin weli kaligood bay raadsan karaan.
"Waxaan nooc ka barannay hawshan oo dhan in ay tahay inaad raacdo dhammaan tillaabooyinka oo ay waxyaabo kaladuwan ka dhigan yihiin waxyaabo kala duwan mararka qaarna aadan garaneynin macnaha guud iyo sida ay u jiraan wax walba," Megan Rapinoe ayaa u sheegtay ESPN.com. Laakiin waa dhibaato aad u weyn. Annaga ahaan, shaqsi ahaan, waa inaan dareensanahay qof aad muhiim ugu ah kiiska, garsooraha, dareenka ansaxinta waxa aan dhahno iyo kiiska aan heyno.
dhinaca aragtida sharciga ah, waxaan u malaynayaa inay tahay talaabo aad u weyn oo horay loo qaaday. "
Markii uu go’aamiyay go'aankiisa, kaas oo quseeya arrinta habsami u socodka ee aan ahayn mudnaanta tallaabada sharciga, sikastaba garsooraha wuxuu diiday dhowr doodood oo loo soo gudbiyay mooshinka Soker ee diidmada. maxaa yeelay waxay ku guuleysteen in ka badan ciyaartoydii xulka qaranka ee muddadii su'aasha ahayd.
Maxkamaddu waxay soo qaadday xukunnadii hore ee ku saabsanaa Xeerka Sinaanta Mushaharka iyo Cinwaanka VII ee Sharciga Xuquuqda Madaniga. 1964, oo ciyaartooydu ku soo qaateen dacwada, takoorku wuxuu ku luglahaa heerarka mushaharka ee ma aha wadarta dakhliga ku soo galay. Kubadda Cagta Mareykanka wuxuu ku dooday mowqifkiisa ah in la diido shahaadada fasalka in sababta oo ah khamaarlayaashu ay kasbadeen dakhli intaas ka badan, aysan ku dhicin wax nacayb sharci ah.
"Intaa waxaa sii dheer, maxkamadaha tarjumaya EPA iyo [Cinwaanka] [illaa xad ka yar] ayaa si cad u diiday doodan - sabab wanaagsan," ayaa lagu yiri go'aanka Jimcihii.
USA. Ciyaartoyda xulka Qaranka Dumarka waxaa loo oggolaan doonaa inay dacweeyaan takoorista jinsiga ee ka dhanka ah USSF. Maddie Meyer / FIFA iyada oo loo marayo Getty Images
Maxkamaddu waxay kaloo diidey dooddii kubbadda cagta Mareykanka ee ahayd in dacwoodayaashu ay bixiyeen "caddeyn aan ku filneyn" caddaynta ah in xaaladaha shaqo ee aan loo sinnayn - oo ay ku jiraan garoonnada lagu ciyaaro oo hooseeya, qiime hooseeya, ganacsi yar Duulimaadyo yar yar oo jaartarka ah - waxay ka kooban yihiin "wax la taaban karo" oo sharci darro ah.
Sida ku xusan go’aanka garsooraha garsoorka, aqbalaada dooda kubada cagta Mareykanka waxay bixin kartaa "natiijo aan macquul aheyn", taas oo ay ku dheehan tahay in haweeney ay heli karto kala badh lacagta nin mudadaas dheer. Waxay dafirtay kala qaybsanaanta iyadoo shaqeysa laba jeer saacado badan.
"Kani waa tallaabo taariikhi ah oo horay loogu qaaday dagaalka loo qabo mushaar loo siman yahay," ayuu yiri Molly Levinson, afhayeenka dacwad-oogaha. “Waxaan ku faraxsanahay in Maxkamaddu ay aqoonsatay takoorka joogtada ah ee USSF ka dhanka ah ciyaartoyga. Waxay diiday doodihii hore ee USSF ee ahaa inay haweenku ku qasban yihiin inay labalaab shaqeeyaan si adag isla markaana ay aqbalaan shuruudo shaqo oo aan adkeyn in lagu bixiyo sida ragga oo kale. USSF iyo waxay dalbanayaan in la joojiyo takoorka sharci darada ah ee lagula kacay dumarka hadda. "
Kubadda Cagta Mareykanka isla markiiba lama helin si ay uga faalloodaan go'aanka. Shir jaraa'id oo ay soo qabanqaabisay 28 October ee si loo soo bandhigo Vlatko Andonovski oo loo magacaabay macalinka cusub ee kooxda Haweenka madaxweynaha xiriirka, Cordeiro ayaa wax laga weydiiyay heerka ay marayso howsha.
hore ayaa yidhi, "ayuu yidhi Cordeiro. "Muxuu federaalku had iyo jeer u heellan yahay inuu bixiyo ciyaartoydeena, ciyaartoydeena xulka qaranka - haweenkeena iyo raggeenna - si cadaalad ah, oo sinnaan ah, iyadoo aan loo eegin jinsiga."
Dhex dhexaadintii labada dhinac dhex martay bishii Agoosto. Dacwaddan ayaa wali ku jirta marxaladda daahfurka, iyo usbuucii la soo dhaafay US Soccer waxay gudbisay codsi ah in la shaaciyo ciyaartoy ka mid ah dakhliga ku soo gala kubada cagta oo aan ka imaanin kubada cagta Mareykanka.
Maxkamad ayaa hadda loo qorsheeyay 5 May 2020.
Maqaalkani wuxuu horey u soo galay (Ingiriisi) http://espn.com/soccer/united-states-usaw/story/3984769/uswnt-wins-ruling-to-pursue-gender-discrimination-suit-as-class-action
Zlatan, Vela ama Rooney? Ayaa dhaliyay goolkii ugu fiicnaa MLS ee 2019? (VIDEO)
Saddex quwadood oo reer Yurub ah ayaa ka baxay Stu Holden's 10 Top
Tilmaamaha: 32 DIY SWEET HACKS EE DHAMMAAN || XUQUUQAHA, CADAALADA CUNTADA IYO TILMAAMAHA GUUD